FBC - Ministirri Muummee Doktar Abiy Ahmad bakka-buutota qaamolee hawaasaa gara-garaa irraa wal-ga’aniif ergaa dabarsan
Ministirri Muummee Doktar Abiy Ahmad bakka-buutota qaamolee hawaasaa gara-garaa irraa wal-ga’aniif ergaa dabarsan
Finfinnee, Ebila 7, 2010 (FBC) Ministirri Muummee Mootummaa Federaalaa Dimookraatawaa Itiyoophiyaa Doktar Abiy Ahmad guyyaa har’aa bakka-buutota qaamolee hawaasaa gara-garaa irraa wal-ga’aniif Galma Bar-kumeetti ergaa dabarsaniiru.
Mata-duree “Waadaa Jaalalaa fi Tokkummaa” jedhuun kan geggeffamu marii uummataa kana irratti Ministirri Muummee Doktar Abiy uummatichi tokkummaa biyyaaf waliin akka dhaabbatu waamicha dhiheessaniiru.
Mariin har’aa Ministirri Muummee Doktar Abiy guyyaa waadaa itti-seenanitti haasaa Uummata Itiyoophiyaa guutuu dhageessisaniin tarkaanfiiwwan sirreeffamaa bal’aa fudhachuu fi gaaffilee uummataa deebisuuf haala waadaa seenaniin kan geggeffamedha.
Mariin uummataa kun tokkummaa, ijaarsa sirna dimookraasii, misoomaa fi sirna bulchiinsa gaarii cimsuuf uummata waliin walitti-dhihaachuun hojjachuuf akka gargaaru ministirri muummee kun wayita kana himaniiru.
Waltajjicha irratti qondaaltonni hojii olaanoo federaalaa, naannoo fi bulchiinsa magaalaa lamaanii, dureewwan amantaa, hayyulee fi bakka-buutonni hawaasa dippilomaasii argamaniiru.
Oduuwwan Biroo « Caffeen Oromiyaa Muudama Haaraa kenne	Mootummaan nagaa biyyattii caalaa mirkaneessuun dinagdee qabbanaa’e si’eessuuf nihojjata: Ministira Muummee Doktar Abiy »